Faritra Analamanga : NAHAVITA NANAMPY IREO KAOMININA TSY ANKANAVAKA -
AccueilSongandinaFaritra Analamanga : NAHAVITA NANAMPY IREO KAOMININA TSY ANKANAVAKA
Faritra Analamanga : NAHAVITA NANAMPY IREO KAOMININA TSY ANKANAVAKA
10/01/2017 admintriatra Songandina 0
Mihazakazaka ny fandehan’ny fotoana, toraka izany koa ny fandehan’ny asa. Nivalona iny ny taona 2016 ary mitsidika sahady ity ny taona 2017.
Ho an’ny Faritra Analamanga manokana, nambaran’ny lehiben’ny Faritra, Ndranto Rakotonanahary, fa betsaka ny asa efa vita tamin’iny taon-dasa iny saingy, mbola maro koa ireo tsy vita izay tsy maintsy hovitaina.
Anisan’ny goavana tamin’izany, tamin’iny taona 2016 iny, raha ny voalaza hatrany, ny nahavitan’ny Faritra Analamanga nanampy sy nanome tantsoroka ireo kaominina rehetra tsy ankanavaka. Sambany ary voalohany teo amin’ny Faritra Analamanga no nisian’izany, raha ny fanazavana. Tafiditra tamin’izany ny fanamboaran-dalana tamin’iny faritra Atsimondrano iny, ny nahavitana ny Maison des Jeunes teny Ambohidratrimo, ny nikitihana sy nanatsarana ny ampahany tamin’ny lalana mankany Mantasoa ary ny nahavitana nanome birao fiasan’ny zandary na “poste avancée” teny Fieferana, ny fanamboarana fotodrafitrasa ara-panatanjahantena teo Mahamasina sy tany Betoho, sns.
Nisy ihany koa ny fifanakalozana teo amin’ny Faritra Analamanga tamin’ireo ben’ny tanàna rehetra ka nahafahana nihaino sy nandray ireo tetikasan’ireo kaominina tsirairay avy.
Voalaza ihany koa fa zava-dehibe tamin’ny Faritra Analamanga ny nahafahan’izy ireo nijery manokana ireo distrika rehetra ka nanampy azy ireo araka izay tratra.
Ankoatra izay, nisy ihany ny fiaraha-miasa teo amin’ny Faritra Analamanga sy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena (MEN) tamin’ny “Journée éstiduantine de la Francophonie” izay ezahina hotanterahina isan-taona manerana ireo distrika.
Taonan’ny asa ny taona 2017
Etsy andaniny, nambaran’ny lehiben’ny Faritra, Ndranto Rakotonanahary, fa mbola maro ireo asa mbola tsy vita tamin’iny taona nivalona iny ary ezahina hovitaina amin’ity taona ity. Anisan’ny goavana amin’izany ny fananganana birao ho an’ny Faritra Analamanga. Anisan’ny fanamby goavana ho an’ity farany mantsy izany. Voalaza fa efa eo am-pitadiavana tany ahafaha-manorina izany birao fiasana izany izy ireo. Manaraka izany, anisan’ny vaindohan-draharahan’izy ireo ihany koa ny famelomana sy fikarakarana ny Analamanga Park. Tsy vitan’izay fa eo ihany koa ny fijerevana manokana ny sosialim-bahoaka amin’ny Faritra Analamanga, toa ny fanomezana rano fisotro madio, ny fanentanana ny olona amin’ny fitandrovana ny tontolo iainana ary hanome maodely ny mpiara-belona amin’izany indrindra amin’ny alalan’ny fambolen-kazo sy fiarovana ny ala, sns, araka ny baikon’ny filoham-pirenena. Fa notsindrian’ny lehiben’ny faritra ny hanandratana ny Faritra Analamanga ho maodelin’ireo Faritra 21 hafa.
Anisan’ny asa goavana amin’ity taona 2017 ity ihany koa ny fananganana ivon-toerana eo amin’ny fambolena sy fiompiana ka ivon-toerana efatra ny an’Analamanga izay hovatsian’ny Organisation International de la Francophonie (OIF) vola.
Kidnapping Annie sy Arnaud : Voasambotry ny zandary ilay tena atidoha
Roa taona mahery kely aty aoriana dia mbola mitohy hatrany ny fisamborana ny olon-dratsy isan’ny nanatanteraraka ny fakana an-keriny an’i Annie sy Arnaud tany Toamasina. Ny zava-dehibe, dia ny tena atidoha nikotrika ity “kidnapping” niafara ...Tohiny
Filoha mivady teny La Réunion kely : Tsy nanadino ireo niangaran’ny vintana